Otú Mmadụ Ga-esi Kwụsị Ichegbu Onwe Ya Gbasara Ego
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bulgarian Cakchiquel Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Otu nwoke aha ya bụ Paul, onye ji ụmụ abụọ, kọrọ ihe mere mgbe e nwere ụkọ nri n’obodo ha. O kwuru, sị: “E nwere mgbe ihe niile a na-ere n’obodo anyị na-ada oké ọnụ, nri adịrịkwa ụkọ. Anyị na-akwụ n’ahịrị ruo ọtụtụ awa n’ebe a na-ere nri. Ma, nri na-agwụkarị tupu e rute ebe anyị nọ. Agụụ nyụrụ ndị mmadụ ịkpakwụ. Ọtụtụ bịara dị ka ogwu azụ̀, ụfọdụ ana-adachikwa ụzọ. Ego ole a na-ere ihe ndị dị mmadụ ezigbo mkpa bịara rịa elu ọjị. O nweghịzi uru ego obodo anyị bara. Ego niile m nwere n’ụlọ akụ̀ enweghịzi oké uru ha baara m.”
Paul ghọtara na ya ga-egosirịrị na ya nwere “ezi amamihe” ma ọ bụrụ na ọ chọghị ka agụụ gụgbuo ndị ezinụlọ ya. (Ilu 3:21) O kwuru, sị: “Abụ m onye ọrụ ngo na-awaya ọkụ. Ma, m bidoro ịna-awayara onye ọ bụla chọrọnụ ọkụ ma onye ahụ ọ̀ kwụrụ m ihe e kwesịrị ịkwụ m ma ọ bụ na ọ kwụrughị ya. Ụfọdụ ndị m rụụrụ ọrụ ji ihe oriri ma ọ bụ ngwá ụlọ kwụọ m ụgwọ. E jiri aka ncha anọ kwụọ m ụgwọ, mụ eree abụọ, dowe abụọ. Ụfọdụ ndị jikwa ụmụ ọkụkọ kwụọ m ụgwọ. Emechara m nwee ụmụ ọkụkọ iri anọ m na-azụ. Mgbe ha toro, erere m ha ma zụta narị ọkụkọ atọ. Eji m ọkụkọ iri ise gbanweta akpa nri ọka abụọ. Akpa nke ọ bụla hà ka akpa simenti n’ịdị arọ. Mụ na ezinụlọ m na ezinụlọ ndị ọzọ anyị nyetụrụ nri ọka a rigidere ya ruo ogologo oge.”
Paul makwa na ihe ga-akacha enyere mmadụ aka ná ndụ bụ ịtụkwasị Chineke obi. Chineke ga-enyere anyị aka ma anyị mee ihe ọ gwara anyị mee. Jizọs gwara anyị ihe ga-enyere anyị aka ma anyị na-achọ inweta ihe e ji ebi ndụ. Ọ sịrị: “Kwụsịkwanụ ịnọ na-echegbu onwe unu; n’ihi na . . . Nna unu maara na ihe ndị a dị unu mkpa.”—Luk 12:29-31.
Ọ dị mwute na Setan, bụ́ ezigbote onye iro Chineke, emeela ka ọtụtụ ndị na-achụ ihe e ji ebi ndụ ka à na-anwụ anwụ. Ọtụtụ ndị na-echegbukarị onwe ha maka ihe ndị dị ha mkpa na ihe ndị ha chere na ọ ga-adị ha mkpa. Ha na-agbalịsi ike ka ha nweta ọtụtụ ihe na-adịghị ha mkpa. Ọtụtụ n’ime ha abanyekwala ná nnukwu ụgwọ. Ọ bụ mgbe ha banyechara n’ụgwọ ka ha na-aghọta na ‘onye gbaziiri ihe bụ ohu onye gbazinyere ya ihe.’—Ilu 22:7.
E nweekwala ụfọdụ ndị mere ihe kpatakwuuru ha nsogbu. Paul kwuru ihe ụfọdụ ndị agbata obi ya mere mgbe ahụ ihe siri ike n’obodo ha. Ọ sịrị: “Ọtụtụ ndị agbata obi anyị hapụrụ ndị ezinụlọ ha na ndị enyi ha gawa mba ọzọ iji lee ma ihe ọ̀ ga-akara ha mma. Ụfọdụ enwelighị ike ịchọta ọrụ n’ihi na ha ejighị akwụkwọ ikike banye n’obodo ndị ahụ. Ha na-ezokarị ezo ka aka ndị uwe ojii ghara ịkpara ha. Ha na-ehikwa n’okporo ụzọ. Ha enyeghị Chineke ohere ka o nyere ha aka. Ma, mụ na ndị ezinụlọ m kpebiri na anyị agaghị ahapụ ibe anyị. Kama, anyị ga-agbakọ mbọ ọnụ n’oge ihe siiri anyị ike ma tụkwasị Chineke obi na ọ ga-enyere anyị aka.”
IME IHE JIZỌS KWURU
Paul sịrị: “Jizọs kwuru, sị: ‘Unu echegbula onwe unu mgbe ọ bụla maka echi, n’ihi na echi ga-enwe nchegbu nke ya. Ihe ọjọọ nke ụbọchị nke ọ bụla ezuworo ya.’” Paul kwuziri, sị: “Ọ bụ ya mere ihe m na-arịọ Chineke n’ụbọchị ọ bụla bụ ka o ‘nye anyị nri taa maka ụbọchị taa’ ka anyị nwee ike ịdịrị ndụ na-aga. Chineke nyekwaara anyị aka otú ahụ Jizọs kwuru. Ọ bụghị mgbe niile ka anyị nwetara ihe anyị chọrọ. E nwere otu ụbọchị m kwụ n’ahịrị na-achọ ịzụta ihe anyị ga-eri. Amaghịkwanụ m ihe a na-ere. Mgbe o mechara rutere m, m chọpụtara na ọ bụ yogọt. Anaghị m enwe mmasị ịracha yogọt. Ma ebe ọ bụ ihe oriri dịnụ, mụ na ezinụlọ m rara ya n’abalị ahụ. Ana m ekele Chineke na ọ gọziri mụ na ezinụlọ m n’oge ahụ niile. O nweghị mgbe anyị gba ọnụ lakpuo.” *
Chineke kwuru, sị: “M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.”—Ndị Hibru 13:5
“Ihe dịtụụrụ anyị mfe ugbu a. Ma, n’oge ahụ ihe siiri anyị ike, anyị mụtara na ịtụkwasị Chineke obi na-akacha enyere mmadụ aka ka ọ ghara ichegbu onwe ya. Ọ bụrụhaala na anyị na-eme uche Jehova, * ọ ga na-enyere anyị aka mgbe niile. Anyị ahụla na ihe Abụ Ọma 34:8 kwuru bụ eziokwu. Ọ sịrị: ‘Detụnụ Jehova ire ma hụ na ọ dị mma; obi ụtọ na-adịrị dimkpa nke gbabara n’ime ya.’ Ọ bụ ya mere na anyị anaghị echegbu onwe anyị gbasara ihe anyị ga-eme ma ihe siere anyị ike ọzọ.
Chineke na-enyere ndị na-efe ya aka inweta nri kwa ụbọchị
“Anyị aghọtala na ihe dị mmadụ mkpa iji dịrị ndụ abụghị ọrụ ma ọ bụ ego, kama, ọ bụ nri. Ọ na-agụsi anyị agụụ ike ịhụ mgbe Chineke ga-emezu nkwa a o kwere: ‘Ọka ga-ejupụta n’elu ụwa.’ Ma, ka ọ dịgodị, ‘ebe anyị nwere ihe oriri na uwe, anyị ga-enwe afọ ojuju n’ihe ndị a.’ Obi na-esi anyị ike ma anyị cheta ihe a Baịbụl kwuru: ‘Ka ụzọ ndụ unu bụrụ nke ịhụnanya ego na-adịghị na ya, ka unu nọ na-enwe afọ ojuju n’ihe ndị dị ugbu a. N’ihi na o kwuwo, sị: “M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.” Ka anyị nwee obi ike wee sị: “Jehova bụ onye na-enyere m aka; agaghị m atụ egwu.”’” *
Okwukwe anyị ga-esirịrị ike tupu anyị enwee ike ‘iso Chineke na-eje ije’ otú Paul na ezinụlọ ya na-eme. (Jenesis 6:9) Ma ihe ò siiri anyị ezigbo ike ugbu a ma ọ̀ ga-esiri anyị ike n’ọdịnihu, inwe okwukwe na igosi na anyị nwere ezi amamihe otú Paul mere ga-enyere anyị ezigbo aka.
Ma, gịnịkwanụ ka anyị ga-eme ma ọ bụrụ na ihe na-echegbu anyị bụ nsogbu ezinụlọ?
^ para. 9 Gụọ Matiu 6:11, 34.
^ para. 10 Baịbụl kwuru na aha Chineke bụ Jehova.
^ para. 11 Gụọ Abụ Ọma 72:16; 1 Timoti 6:8; Ndị Hibru 13:5, 6.